UZahara uphalaza usizi ngengoma - Ilanga News
Home Izindaba UZahara uphalaza usizi ngengoma
UZahara uphalaza usizi ngengoma
Uxwayise amaciko asengamaklume ukuthi angabi othathekile
SIBHODLA ngengoma mayelana nobuhlungu esidlule kubona isihlabani somculo, uZahara, esesike saba sematheni mayelana nezinkinga ezasihlasela emuva kokuvula inkampani yaso, iZahara Army.
Le ntokazi ogama layo langempela nguBulelwa Mkutukana eyazakhela igama kwezomculo ngenoni elingasoze lalibaleka, elithi, “Loliwe” izokhipha i-albhamu ethi, “Siyaphi” ngokuphela kukaMfumfu (October).
Ixwayisa abalandeli bayo ngokuthi uma bezazi ukuthi banezinyembezi eziseduze, kuyomele baqaphele uma belalela le albhamu, kwazise bazozithola sebekhala.
Uthi ubuhlungu asedlule kubona kusukela wazimela, bunzima kakhulu.
“Namanje kusenzima, ngeke ngiqambe amanga ngithi sekuhamba kahle. Kuyaziwa ukuthi izingoma zami zikhuluma ngempilo yami, yingakho ngithi indlela engijule ngayo kuleli cwecwe izofikisela abaningi ngezinyembezi,” kusho yena.
Uthi umuntu ozoyilalela le albhamu uzogcina esecabanga ezakhe izinkinga, agcine esekhala.
Le albhamu inezingoma eziwu-14, uyiqophe ngaphansi kweZahara Army, kanti izingoma zididiyelwe nguMojalefa Thebe oselokhu aqala ukusebenza naye kusekhona uRobbie Malinga ongasekho emhlabeni.
Lesi sihlabani sixwayisa amaciko angakasayini ezinkampanini ezinkulu ukuba athathe isikhathi sawo, angathatheki ajabulele into engekho.
“Okwenzeka kimina kangithandi kwenzeke komunye umuntu. Ngaphambi kokuba ujabulele ukuthi uthole inkampani enkulu, kubalulekile ukuthi wenze uphenyo lwakho kuqala, uwazi amalungelo akho njengeciko, wazi ukuthi yikuphi la okumele ukhokhele-ke khona.
“Mina namanje ngisalwela imali yami eyasala enkampanini eyangisusa ekhaya,” kusho uZahara.
Uthi amaciko esifazane yiwona adeleleke kakhulu ngoba amaningi angena kulo mkhakha engazi.
“Kunamaciko amaningi esifazane, ikakhulukazi ezindaweni ezisemakhaya acindezelekile, angawazi amalungelo awo.
“Yingakho ngithi mawenze uphenyo kuqala, angajatshuliswa ngamagama amakhulu,” kusho yena.
UZahara wafika kwezwakala ngo-2010 nge-albhamu ethi, Loliwe, ngemuva kwalokho wakhipha ethi, “Phendula” kwaba ngethi, “Mgodi” njengoba esezokhipha lena ethi “Siyaphi”.
Previous articleUbulawe wanqunywa uqhoqhoqho kufunwa ophaqa
Next articleIphoyisa liqothe ngenhlamvu umndeni wakwabo